Sprint vita any Vietnam! Hon Hai dia namerina mpiasa mihoatra ny 1.000 tany Vietnam - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Sprint vita any Vietnam! Hon Hai dia namerina mpiasa mihoatra ny 1.000 tany Vietnam
Sprint vita any Vietnam! Hon Hai dia namerina mpiasa mihoatra ny 1.000 tany Vietnam
Raha ny vaovao isan'andro ara-toekarena, ny vondrona Hon Hai dia nanangana andian-drafitra fandraisana mpiasa tany Vietnam, ka nahitana mpiasa mihoatra ny 1 000 tao amin'ny faritany Bac Giang sy Bac Ninh. Ho fanampin'ny mpandraharaha fivoriambe, dia nanisa ny toeran'ny injeniera ihany koa izy ireo.
Araka ny tatitry ny haino aman-jery Vietnamese, ny vondrona Hon Hai dia namoaka hafatra momba ny fandraisana andraikitra teo an-toerana, ary te-hanao mpiasa mihoatra ny 1 000 ao amin'ny orinasa Beijiang sy ny sciption any Vietnam. Ho fanampin'ny mpandraharaha andalana fivoriambe, Hon Hai dia nanokatra injeniera kalitao tsara kokoa (SQE), injeniera ara-tsaina voajanahary (AI).
Araka ny tatitra tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity, nanambara ny governemanta Vietnamianina fa nankatoavina ny vondrona Hon Hai mba hampiasa vola $ 270 tapitrisa dolara ao amin'ny fananganana orinasa ao amin'ny orinasa Fukang Technology eo an-toerana. Ny zavamaniry vaovao dia ao amin'ny faritany Bac Giang, Vietnam, ary hanamboatra fitaovana 8 tapitrisa isan-taona.
Ny governemanta Vietnamianina dia nanondro fa i Hon Hai dia namatsy vola 1,5 miliara dolara tao amin'ny faritra eo an-toerana hatreto, ary mikasa ny hampitombo ny fampiasam-bolany amin'ny 700 tapitrisa dolara amin'ity taona ity ary handray anjara amin'ny mpiasa an-toerana mihoatra ny 10.000.
Voalaza fa ny zavamaniry vaovao Hon Hon ao Beijiang any Vietnam dia ny fangatahan'ny Apple ho an'ny mpanjifa lehibe. Amin'ny toe-javatra mampitombo ny loza ara-politika amin'ny ady ara-politika Sino-amerikana, manantena i Hon Hai hamindra ny ampahany amin'ny raharaham-barotra Mac sy iPad any Vietnam ary antenaina hanomboka famokarana ao anatin'ny taona ity. .